RW Rooble oo $200,000 u balan qaaday dhismaha G/Diyaaradaha Caabudwaaq – Banaadir Times
Shil khasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Beledweyne
Somaliland oo Ciidamo kala dhex-dhigtay Maleeshiyad dagaalamay
Xildhibaan hore oo dhaliilay siyaasadda Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo la xiray
Mareykanka oo dib u soo celiyay Saraakiil uu kala baxay Soomaaliya
Maamulka Koonfur Galbeed oo dad horleh u xiray dilkii Carruurta
Maxaa kasoo baxay kulankii Midowsha Musharixiinta, Qoor Qoor & Cali Guudlaawe?
RW Rooble oo $200,000 u balan qaaday dhismaha G/Diyaaradaha Caabudwaaq
By banaadir 17th December 2020 111 No comment
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay in xukuumaddu ay $200,000 (Labo boqol oo kun oo Doollar) ku bixineyso dhismaha wajiga labaad ee garoonka diyaaradaha Degmada Caabudwaaq.
Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxda Galmudug oo galabta booqday garoonka diyaaradaha Caabudwaaq ayaa ku ammaanay bulshada degmadu sida ay isugu xilqaameen dhismaha garoonka diyaaradaha Caabudwaaq oo gaarayay 3KM, kaas oo kala bar ay bulshadu deegaanku dhiseen.
Waxa uu Ra’iisul Wasaaruhu ballan qaaday in dowladdu kaalin hormuud ah ka qaadan doonto dhismaha garoonkan oo muhiimmad gaar ah u yeelanaya Caabudwaaq, Galmudug iyo Guud ahaan dalka.
Dhanka kale Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday xarunta Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Caabudwaaq, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen madaxda faraca jaamacadda iyo mas’uuliyiinta Galmudug.
Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo Gabi ahaanba maanta xeran…
Maxay tahay tallaabada Turkigu qaaday ee ay qoonsadeen Midowga Musharixiinta?
DEG-DEG shirkii dhuusamareeb 4 oo qarka usaaran in uu ku dhamaado fashil
By banaadir 5th February 2021
Dowladda Soomaaliya oo Maanta dib u furtay waddo dhowr sano xirneyd
By banaadir 12th January 2021
Cidda sugeysa Amniga doorashooyinka Soomaaliya oo la shaaciyay
By banaadir 23rd January 2021
Bankiga Adduunka Oo Mashaariic Horumarineed Ka Fulinaya Puntland
Kalluumeysatada Mudug Oo Ka Cabanaya Maraakiib Shisheeye
Qatar Oo Mamnuucday Badeecooyinka Dowladaha Go’doomiyey
Soomaaliya Iyo Djibouti Oo Kala Saxiixday Heshiisyo Ku Qotoma Iskaashiga Dhinacyada Socdaalka Gaadiidka Cirka Iyo Dhulka
Kulanka ugu xiisaha badan kubada cagta oo caawa la ciyaarayo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyay Magaalada Bristol
Sawirro:-Kooxda Real Madrid oo guulweyn ka gaartay kooxda Barcelona
car bomb blast near military base in Mogadishu
Somalia in shock after Mogadishu hotel attack
A struggle between the President of the Republic and the Assembly in Somalia? Propaganda!
Banaadirtimes waa wargeys soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha siyaasada iyo horumarada ka socda dalka isla markaana isha ku haya wararka iyo waxyaabaha ka dhacaya Aduunka iyo Siyaasadaha Geeska Africa . Waxaad nagala soo xiriiri kartaa emayl ama taleefan.